YouTube မှာ တစ်သက်တာ လူကြည့်အများဆုံး ဗွီဒီယို (၁၀) ခုကို သိကြပြီလား
23 Apr 2018 . 2:28 PM
YouTube ဆိုတာ ကြည့်သူတွေအတွက် စိတ်အပန်းပြေစရာ၊ ပညာရစရာတွေ စုစည်းနေသလို YouTuber တွေအတွက်လည်း ပို်က်ဆံရှာစရာနေရာကြီး တစ်ခုဖြစ်နေတာ ကြာပါပြီ။
YouTube ကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ စတင်ဖန်တီးခဲ့ပြီး ပထမဆုံး တင်ခဲ့တဲ့ ဗွီဒီယိုကတော့ “Me at the zoo” ဆိုတဲ့ ဗွီဒီယိုဖြစ်ပြီး ဧပြီလ ၂၃ ရက် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ လွှင့်တင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိ်န်ကစပြီး သုံးစွဲသူ တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာလိုက်တာ အခုဆိုရင် YouTube Account ပေါင်း ၁.၃ ဘီလီယံလောက် ဆောက်ထားပြီးကြပါပြီ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်ကို ရောက်လာတဲ့အခါမှာ တစ်နေ့ကို ဗွီဒီယိုပေါင်း ၅ ဘီလီယံလောက်ကို ကြည့်ရှုနေကြပြီး တင်တဲ့သူတွေဟာလည်း မိနစ်တိုင်းကို ဗွီဒီယိုတွေ နာရီ ၃၀၀ စာလောက် တင်နေခဲ့တာပါ။
ဒါဆိုရင် YouTube မှာ အကြည့်အများဆုံး Video တွေက ဘယ်လို အကြောင်းအရာတွေများ ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ သီချင်းဗွီဒီယိုတွေပါ..YouTube ရဲ့ ၄.၃% သော အခြင်းအရာတွေဟာ ဂီတသီးသန့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် YouTube ရဲ့ လူကြည့်အများဆုံး ဗွီဒီယို ၁၀ ခုဟာ ဂီတဗွီဒီယိုတွေ ဖြစ်နေတာ ထူးပြီး အံ့သြစရာမရှိတော့ပါဘူး။ ကဲ ဘယ်ဗွီဒီယိုတွေက ဦးဆောင်နေလဲ တစ်ချက်လောက် ကြည့်လိုက်ရအောင်။
Despacito ကတော့ Gangnam Style ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ထိပ်ကို ရောက်ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Despacito ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်က အင်္ဂလိပ်လှို Slowly ဖြစ်ပြီး ပွာတိုရီကန် အဆိုတော် Luis Fonsi နဲ့ ပွာတိုရီကန် Rapper Daddy Yankee က သီဆိုထားတာပါ။ ဒီသီချင်းဟာ နိုင်ငံပေါင်း (၄၇)နိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းစာရင်းမှာ ရပ်တည်ခဲ့ပြီး Justin Bieber နဲ့ပါ Remix Version ထွက်ခဲ့တဲ့အတွက် ပိုပြီးတော့ အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့လည်း ယူဆရပါတယ်။ အခုဆိုရင် ဒီဗွီဒီယိုဟာ ကြည့်ရှုသူ( ၅)ဘီလီယံကျော်ရှိနေပြီး YouTube ရဲ့ တသက်တာ အကြည့်များဆုံး နံပါတ် ၁ နေရာကို ရယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
“It’s beenalong day without you, my friend” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးဟာ အရင်က YouTube နံပါတ်(၁)နေရာကို Gangnam Style ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ရောက်ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ “See You Again” ရဲံ အောင်မြင်မှုဟာ Furious7ရဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ ဆက်စပ်နေပြီး Paul Walker ရဲ့ သေဆုံးမှုနဲ့လည်း ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဒီသီချင်းဟာ သီဆိုတဲ့ အဆိုရှင် Wiz Khalifa နဲ့ Charlie Puth အတွက်ပါ အအောင်မြင်ဆုံးသီချင်းဖြစ်ပြီး US Billboard 100 မှာ (၁၂) ပတ်ကြာထိပ်တန်းအဆင့်နဲ့ ရပ်တည်ခဲ့တာပါ။ See You Again ကတော့ ၃.၅ ဘီလီယံ Views ရရှိထားပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်ဟာ Ed Sheeran ရဲ့ နှစ်ပါပဲ၊ Shape of You ကို ဇန်နဝါရီ ၆ ရက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသီချင်းဟာ အကြိမ်(၆၀) မြောက် Grammy ဆုပေးပွဲမှာလည်း Best Pop Solo Performance အတွက် ဆန်ကာတင်ရွေးချယ်ခြင်းခံရပါသေးတယ်။ဇန်နဝါရီလ (၃၀) မှာ ဂီတဗွီဒီယိုတင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ခဏအတွင်းမှာပဲ ၁ ဘီလီယံ Views ရခဲ့တဲ့ ဗွီဒီယိုပါပဲ။ Shape of You ဟာ အခုဆိုရင် ၃.၄ ဘီလီယံ Views ရှိနေပါပြီ။
Gangnam Style ကတော့ သိပ်အများကြီးညွှန်းစရာမလိုဘဲ Trend တစ်ခုဖြစ်အောင်ထိ ပေါက်သွားတာပါ။ ဒီဗွီဒီယိုကိုတော့ ဇူလိုင် ၁၅၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ YouTube တင်ခဲ့ပြီး Justin Bieber ရဲ့ သီချင်းတွေကိုတောင် ကျော်ဖြတ်ပြီး YouTube မှာ နံပါတ်တစ်ချိတ်ခဲ့တာပါ။ နံပါတ်တစ်နေရာမှာ ရက်ပေါင်း ၁,၆၈၉ ရက်ကြာပြီးမှ ဆင်းပေးခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ ဒီဗွီဒီယိုဟာ ကြည့်ရှုမှုအကြိမ်ရေ ၃.၁ ဘီိလီယံထိရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
UpTown Funk ကတော့ Mark Ronson နဲ့ Bruno Mars တွဲလုပ်ထားတဲ့ သီချင်းပါ။ US Billboard 100 မှာ နံပါတ် (၁) အနေနဲ့ (၁၄) ပတ်ဆက်တိုက် ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းဟာ Record of the Year အပါအဝင် Grammy ဆု (၂) ဆု ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ခုချိန်ထိ ကြည့်ရှုမှုအကြိမ်ေရ (၃)ဘီလီယံရှိပြီး ထိပ်တန်း ဗွီဒီယိုတစ်ခုအနေနဲ့ ရပ်တည်နေပါတယ်။
YouTube ရဲ့ ကြည့်ရှုသူအများဆုံး ဗွီဒီယိုတွေထဲမှာ Justin Bieber ရဲ့ ဗွီဒီယိုတွေကတော့ မပါလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲနော့်။ Sorry သီချင်းဟာတော့ သူ့ရဲ့ စတုတ္ထမြောက်အယ်လ်ဘမ် Purpose ထဲက သီချင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီသီချင်းကို နယူးဇီလန် အကနည်းပြ Parris Goebel နဲ့ နယူးဇီလန်အကအဖွဲ့ ReQuest Dance Crew နဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး အစက Lyric Video အနေနဲ့ ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ပေါက်လွန်းလို့ Official Video ဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ ၂.၉ ဘီလီယံ Views ရှိပြီး အဆင့် (၆) နေရာမှာ ရပ်တည်နေခဲ့ပါတယ်။
Masha and the Bear : Recipe for Disaster – Get Movies
ဒီစာရင်းမှာပါဝင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော Music Video မဟုတ်တဲ့အပြင် Official Video တစ်ခုလည်း မဟုတ်ဘဲ ကြည့်သူများတဲ့ ဗွီဒီယိုပါ။ ရှရှားဘာသာစကားနဲ့ ဖြစ်ပြီး Russian Animated TV Series လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Episode တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Recipe of Disaster” ဟာ Episode No. 17 ဖြစ်ပြီး ကြည့်ရှုတဲ့ အကြိမ်ရေ ၂.၉ ဘီလီယံထိရှိနေပါတယ်။
Sugar ကတော့ Maroon5တွေရဲ့ ပဉ္စမမြောက် Album “V” ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗွီဒီယိုထဲမှာ Maroon5ဟာ မင်္ဂလာဆောင်တွေကို ရုတ်တရက်ဝင်ရောက်ဖျော်ဖြေတဲ့ ပုံတွေနဲ့ ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်တွေကို ရုတ်တရက်ဝင်ရောက်ဖျော်ဖြေတာဟာ အစစ်ဖြစ်ပြီး မရိုက်ကူးခင်မှာ Band တစ်ခုဝင်ရောက်ဖျော်ဖြေမယ်လို့ ကြိုတင်သတိပေးချက်ပို့ခဲ့ပေမယ့် ဘယ်သူကမှ Maroon5လို့ မထင်ခဲ့ကြပါဘူး။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် Production Team ဟာ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်က Wedding Planner တွေနဲ့ သင့်တော်တဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တွေကို ရှာဖွေခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ View ကတော့ အခုထိ ၂.၅ ဘီလီယံရှိပါပြီ။
Shake It Off ဟာ Taylor ရဲ့ “1989” အယ်လ်ဘမ်ထဲက သီချင်းဖြစ်ပြီး Billboard ရဲ့ Hot 100 Song ထဲမှာ ရက်သတ္တပတ် (၅၀)တိတိ ဆက်တိုက်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ Video မှာ အကပုံစံမျိုးစုံသုံးထားပြီး Hip-hop ၊ Lyrical ၊ Ballet ၊ Jazz ၊ Cheerleader နဲ့ Twerking တို့အထိပါပါတယ်။ ဒီဗွီဒီယိုဟာ ကြည့်ရှုမှုအကြိမ်ရေ ၂.၅ ဘီလီယံရှိပြီ ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ လူကြည့်အများဆုံးဗွီဒီယိုလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Bailando – Enrique Iglesias ft. Descemer Bueno and Gente De Zona
Bailando ကတော့ Enrique ရဲ့ ဆယ်ခွေမြောက် “Sex and Love” ထဲမှာ ပါတဲ့ သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းကို Version မျိုးစုံ ဖန်တီးခဲ့ပြီး Music Video ကတော့ ၂.၄ ဘီလီယံ Views ထိ ရောက်ရှိခဲ့တဲ့အတွက် အဆင့် (၁၀) နေရာမှာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Ref : www.influencermarketinghub.com
YouTube မှာ တဈသကျတာ လူကွညျ့အမြားဆုံး ဗှီဒီယို (၁၀) ခုကို သိကွပွီလား
YouTube ဆိုတာ ကွညျ့သူတှအေတှကျ စိတျအပနျးပွစေရာ၊ ပညာရစရာတှေ စုစညျးနသေလို YouTuber တှအေတှကျလညျး ပျိုကျဆံရှာစရာနရောကွီး တဈခုဖွဈနတော ကွာပါပွီ။
YouTube ကို ၂၀၀၅ ခုနှဈမှာ စတငျဖနျတီးခဲ့ပွီး ပထမဆုံး တငျခဲ့တဲ့ ဗှီဒီယိုကတော့ “Me at the zoo” ဆိုတဲ့ ဗှီဒီယိုဖွဈပွီး ဧပွီလ ၂၃ ရကျ ၂၀၀၅ ခုနှဈမှာ လှငျ့တငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီအခြိနျကစပွီး သုံးစှဲသူ တဖွညျးဖွညျးတိုးပှားလာလိုကျတာ အခုဆိုရငျ YouTube Account ပေါငျး ၁.၃ ဘီလီယံလောကျ ဆောကျထားပွီးကွပါပွီ။
၂၀၁၈ ခုနှဈကို ရောကျလာတဲ့အခါမှာ တဈနကေို့ ဗှီဒီယိုပေါငျး ၅ ဘီလီယံလောကျကို ကွညျ့ရှုနကွေပွီး တငျတဲ့သူတှဟောလညျး မိနဈတိုငျးကို ဗှီဒီယိုတှေ နာရီ ၃၀၀ စာလောကျ တငျနခေဲ့တာပါ။
ဒါဆိုရငျ YouTube မှာ အကွညျ့အမြားဆုံး Video တှကေ ဘယျလို အကွောငျးအရာတှမြေား ဖွဈနိုငျပါသလဲ၊ ဟုတျပါတယျ၊ သီခငျြးဗှီဒီယိုတှပေါ..YouTube ရဲ့ ၄.၃% သော အခွငျးအရာတှဟော ဂီတသီးသနျ့ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ YouTube ရဲ့ လူကွညျ့အမြားဆုံး ဗှီဒီယို ၁၀ ခုဟာ ဂီတဗှီဒီယိုတှေ ဖွဈနတော ထူးပွီး အံ့သွစရာမရှိတော့ပါဘူး။ ကဲ ဘယျဗှီဒီယိုတှကေ ဦးဆောငျနလေဲ တဈခကျြလောကျ ကွညျ့လိုကျရအောငျ။
Despacito ကတော့ Gangnam Style ကို ကြျောဖွတျပွီး ထိပျကို ရောကျရှိခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ Despacito ရဲ့ အဓိပ်ပာယျက အင်ျဂလိပျလှို Slowly ဖွဈပွီး ပှာတိုရီကနျ အဆိုတျော Luis Fonsi နဲ့ ပှာတိုရီကနျ Rapper Daddy Yankee က သီဆိုထားတာပါ။ ဒီသီခငျြးဟာ နိုငျငံပေါငျး (၄၇)နိုငျငံရဲ့ ထိပျတနျးစာရငျးမှာ ရပျတညျခဲ့ပွီး Justin Bieber နဲ့ပါ Remix Version ထှကျခဲ့တဲ့အတှကျ ပိုပွီးတော့ အောငျမွငျခဲ့တယျလို့လညျး ယူဆရပါတယျ။ အခုဆိုရငျ ဒီဗှီဒီယိုဟာ ကွညျ့ရှုသူ( ၅)ဘီလီယံကြျောရှိနပွေီး YouTube ရဲ့ တသကျတာ အကွညျ့မြားဆုံး နံပါတျ ၁ နရောကို ရယူထားနိုငျခဲ့ပါတယျ။
“It’s beenalong day without you, my friend” ဆိုတဲ့ သီခငျြးလေးဟာ အရငျက YouTube နံပါတျ(၁)နရောကို Gangnam Style ကို ကြျောဖွတျပွီး ရောကျရှိခဲ့ဖူးပါတယျ။ “See You Again” ရဲံ အောငျမွငျမှုဟာ Furious7ရဲ့ အောငျမွငျမှုနဲ့ ဆကျစပျနပွေီး Paul Walker ရဲ့ သဆေုံးမှုနဲ့လညျး ဆကျစပျနပေါတယျ။ ဒီသီခငျြးဟာ သီဆိုတဲ့ အဆိုရှငျ Wiz Khalifa နဲ့ Charlie Puth အတှကျပါ အအောငျမွငျဆုံးသီခငျြးဖွဈပွီး US Billboard 100 မှာ (၁၂) ပတျကွာထိပျတနျးအဆငျ့နဲ့ ရပျတညျခဲ့တာပါ။ See You Again ကတော့ ၃.၅ ဘီလီယံ Views ရရှိထားပါတယျ။
၂၀၁၇ ခုနှဈဟာ Ed Sheeran ရဲ့ နှဈပါပဲ၊ Shape of You ကို ဇနျနဝါရီ ၆ ရကျ ၂၀၁၇ ခုနှဈမှာ ထုတျလှငျ့ခဲ့ပါတယျ။ ဒီသီခငျြးဟာ အကွိမျ(၆၀) မွောကျ Grammy ဆုပေးပှဲမှာလညျး Best Pop Solo Performance အတှကျ ဆနျကာတငျရှေးခယျြခွငျးခံရပါသေးတယျ။ဇနျနဝါရီလ (၃၀) မှာ ဂီတဗှီဒီယိုတငျလိုကျတဲ့အခါမှာတော့ ခဏအတှငျးမှာပဲ ၁ ဘီလီယံ Views ရခဲ့တဲ့ ဗှီဒီယိုပါပဲ။ Shape of You ဟာ အခုဆိုရငျ ၃.၄ ဘီလီယံ Views ရှိနပေါပွီ။
Gangnam Style ကတော့ သိပျအမြားကွီးညှနျးစရာမလိုဘဲ Trend တဈခုဖွဈအောငျထိ ပေါကျသှားတာပါ။ ဒီဗှီဒီယိုကိုတော့ ဇူလိုငျ ၁၅၊ ၂၀၁၂ ခုနှဈမှာ YouTube တငျခဲ့ပွီး Justin Bieber ရဲ့ သီခငျြးတှကေိုတောငျ ကြျောဖွတျပွီး YouTube မှာ နံပါတျတဈခြိတျခဲ့တာပါ။ နံပါတျတဈနရောမှာ ရကျပေါငျး ၁,၆၈၉ ရကျကွာပွီးမှ ဆငျးပေးခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။ အခုတော့ ဒီဗှီဒီယိုဟာ ကွညျ့ရှုမှုအကွိမျရေ ၃.၁ ဘီလီယံထိရှိနပွေီ ဖွဈပါတယျ။
UpTown Funk ကတော့ Mark Ronson နဲ့ Bruno Mars တှဲလုပျထားတဲ့ သီခငျြးပါ။ US Billboard 100 မှာ နံပါတျ (၁) အနနေဲ့ (၁၄) ပတျဆကျတိုကျ ရပျတညျခဲ့တဲ့ သီခငျြးဖွဈပါတယျ။ ဒီသီခငျြးဟာ Record of the Year အပါအဝငျ Grammy ဆု (၂) ဆု ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ခုခြိနျထိ ကွညျ့ရှုမှုအကွိမျေရ (၃)ဘီလီယံရှိပွီး ထိပျတနျး ဗှီဒီယိုတဈခုအနနေဲ့ ရပျတညျနပေါတယျ။
YouTube ရဲ့ ကွညျ့ရှုသူအမြားဆုံး ဗှီဒီယိုတှထေဲမှာ Justin Bieber ရဲ့ ဗှီဒီယိုတှကေတော့ မပါလို့ ဘယျဖွဈမလဲနေျာ့။ Sorry သီခငျြးဟာတော့ သူ့ရဲ့ စတုတ်ထမွောကျအယျလျဘမျ Purpose ထဲက သီခငျြးဖွဈပွီး ၂၀၁၅ ခုနှဈ အောကျတိုဘာလ ၂၃ ရကျနမှေ့ာ ထှကျရှိခဲ့ပါတယျ။
ဒီသီခငျြးကို နယူးဇီလနျ အကနညျးပွ Parris Goebel နဲ့ နယူးဇီလနျအကအဖှဲ့ ReQuest Dance Crew နဲ့ ရိုကျကူးခဲ့ပွီး အစက Lyric Video အနနေဲ့ ရညျရှယျခဲ့ပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာတော့ ပေါကျလှနျးလို့ Official Video ဖွဈသှားခဲ့တာပါ။ ၂.၉ ဘီလီယံ Views ရှိပွီး အဆငျ့ (၆) နရောမှာ ရပျတညျနခေဲ့ပါတယျ။
ဒီစာရငျးမှာပါဝငျတဲ့ တဈခုတညျးသော Music Video မဟုတျတဲ့အပွငျ Official Video တဈခုလညျး မဟုတျဘဲ ကွညျ့သူမြားတဲ့ ဗှီဒီယိုပါ။ ရှရှားဘာသာစကားနဲ့ ဖွဈပွီး Russian Animated TV Series လညျး ဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့ Episode တဈခုဖွဈတဲ့ “Recipe of Disaster” ဟာ Episode No. 17 ဖွဈပွီး ကွညျ့ရှုတဲ့ အကွိမျရေ ၂.၉ ဘီလီယံထိရှိနပေါတယျ။
Sugar ကတော့ Maroon5တှရေဲ့ ပဉ်စမမွောကျ Album “V” ထဲမှာ ပါဝငျတဲ့ သီခငျြးဖွဈပါတယျ။ ဒီဗှီဒီယိုထဲမှာ Maroon5ဟာ မင်ျဂလာဆောငျတှကေို ရုတျတရကျဝငျရောကျဖြျောဖွတေဲ့ ပုံတှနေဲ့ ရိုကျကူးထားတာ ဖွဈပါတယျ။ မင်ျဂလာဆောငျတှကေို ရုတျတရကျဝငျရောကျဖြျောဖွတောဟာ အစဈဖွဈပွီး မရိုကျကူးခငျမှာ Band တဈခုဝငျရောကျဖြျောဖွမေယျလို့ ကွိုတငျသတိပေးခကျြပို့ခဲ့ပမေယျ့ ဘယျသူကမှ Maroon5လို့ မထငျခဲ့ကွပါဘူး။ ဒီလိုလုပျဖို့အတှကျ Production Team ဟာ လော့ဈအိနျဂလြိဈက Wedding Planner တှနေဲ့ သငျ့တျောတဲ့ မင်ျဂလာဆောငျတှကေို ရှာဖှခေဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။ View ကတော့ အခုထိ ၂.၅ ဘီလီယံရှိပါပွီ။
Shake It Off ဟာ Taylor ရဲ့ “1989” အယျလျဘမျထဲက သီခငျြးဖွဈပွီး Billboard ရဲ့ Hot 100 Song ထဲမှာ ရကျသတ်တပတျ (၅၀)တိတိ ဆကျတိုကျရပျတညျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒီ Video မှာ အကပုံစံမြိုးစုံသုံးထားပွီး Hip-hop ၊ Lyrical ၊ Ballet ၊ Jazz ၊ Cheerleader နဲ့ Twerking တို့အထိပါပါတယျ။ ဒီဗှီဒီယိုဟာ ကွညျ့ရှုမှုအကွိမျရေ ၂.၅ ဘီလီယံရှိပွီ ဖွဈပွီး အမြိုးသမီးအနုပညာရှငျတဈယောကျရဲ့ လူကွညျ့အမြားဆုံးဗှီဒီယိုလညျး ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
Bailando ကတော့ Enrique ရဲ့ ဆယျခှမွေောကျ “Sex and Love” ထဲမှာ ပါတဲ့ သီခငျြးဖွဈပါတယျ။ ဒီသီခငျြးကို Version မြိုးစုံ ဖနျတီးခဲ့ပွီး Music Video ကတော့ ၂.၄ ဘီလီယံ Views ထိ ရောကျရှိခဲ့တဲ့အတှကျ အဆငျ့ (၁၀) နရောမှာ ရပျတညျနိုငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။